တောင်ငူသား: Gtalk နဲ့ ချစ်သက်သေ မထူကြစေလို
Posted by Taungoo at 4:55 PM
Labels: မျှဝေခြင်း , ဆောင်းပါး
That 's right, bro!
အင်း..ဒါလည်း သတိချပ်စရာပါ ၊ :)
ဟုတ်ပ bro ရေ….တစ်ခါတစ်ခါ hi တောင်မလုပ်ရဲဘူး…:D
ညီလေး (ကေတုမတီ သား) ကြီးရေ.
ကျနော်လည်းတစ်ခါဖြစ်ဖူးတယ်ဗျ တော်တော်ဆိုးတယ် သူကအရင်နှုတ်ဆက်လာတာ စိတ်တိုလိုက်တာ အရမ်းပဲဗျာ ။
ဖြစ်တာမှ ခဏခဏ ဖဲဗျာ။
Absolutely Right ! But ... I've to share ... :P
"i have to share"
ခဏ ခဏ ကိုဖြစ်ပါတယ်။
ဖြစ်တတ်တာလေးကို ရှာရှာဖွေဖွေရေးထားတာ တကယ် သဘောကျမိပါတယ်။ အင်း... ချစ်သူတွေရဲ့ နှစ်ကိုယ်ကြားကိစ္စတစ်ခု ဆိုတော့ ဘာပြောရမှန်းတောင် မသိတော့ပါဘူး။ သူငယ်ချင်းကို စကားမပြောခင် စကားဝှက် အရင်ပြောလို့ ပြောရမလိုပဲ။ အင်း အဲဒီ စကားဝှက်ပါ ပြောပြထားရင်တော့ ခက်ပြီနော်း))
တော်ပြီ မshare တော့ဝူး နောက်ဆိုရင်။ သိသွားပြီ။ ကျေးဇူးပါကိုတောင်ငူသားရေ။
ရှင်းရှင်းတော့ခဏခဏ.. gtalk ပိုင်ရှင်ကောင်လေးရဲ့ကောင်မလေး အူတိုပြီးဆဲခံရတာ..